Cabbista Biyaha Kulul Iyo Liin Dhanaanta Waxay Yareeyaan Miisaanka Jirka, Waxayna Daaweeyaan Xanuuno Badan - Daryeel Magazine
Cabbista Biyaha Kulul Iyo Liin Dhanaanta Waxay Yareeyaan Miisaanka Jirka, Waxayna Daaweeyaan Xanuuno Badan
Biyuhu waxa ay ku tisan yihiin curiyeyaasha dabiiciga ah ee ugu muhiimsan qoynta jirka, gaar ahaan marka uu qofku cabbo biyo ku filan, sababtuna waa unugyo jirka ku jira oo mar kasta u baahan biyo si ay u nuugaan curiyeyaasha cunto iyo si ay qashin qub u sameeyaan, waxaana qof ku waajib ah in uu maalintii cabbo ugu yaraan 8 koob oo biyo ah si uu u ilaashado qoyaanka jidhka ee muhiimka ah.
Biyuhu labada kelyood waxa ay ka caawiyaan qashin qubka iyo in ay suntan ka saaraan jirka, waxa aanay lagama maarmaan u yihiin dhammaan shaqooyinka kiimikaad iyo cunto shiidista ee jirka, laakiin su’aashu waxa ay tahay biyaha kululi saamayn ka myeelan karaan dhimista miisaanka?
Cilmibaaris lagu faafiyey majaladda nafaqada cuntada oo ka soo baxda dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in koox dad waaweyn oo miisaankoodu saa’id yahay ay xeeldheerayaal caafimaad ku sameeyeen tijaabo ah in maalin kasta ay cabbaan koob biyo diirran ah, ka hor inta aanay quraacda cunin, waxaana u soo baxday natiijo ahin biyaha kululi ay caawiyaan in boqolkiiba 13 ay hoos u dhacdo heer Kalooriga (Calories) ee jirka ku jiraa, waana sababta ta keenaysa in miisaanku hoos u dhaco, marka muddo la wado cabbista biyaha kulul.
Liin dhanaanta waxaa ku jira Vitamin C oo kobciya caafimaadka iyo quruxda maqaarka jirka, sidoo kale liin dhanaanta waxaa ku jira macdanta calcium, potassium, iyo pectin fiber. Faaidooyinka ugu waa wayn ee liin dhanaanta waxaa ka mid ah inay caawiso miisaan dhimista. Liin dhanaantu waxay jirka ka saarta sunta.
Faaidooyinka caafimaad ee biyaha liin dhanaanta leh
Caawinta dheefshiidka: Waxaa jira dad cabba biyo lagu daray liin dhanaan subaxda hore si ay uga hortagaa calool istaagga, Cabbista biyo diirran oo liin dhanaan lagu daray waxay dhiiragelineysaa dhaqdhaqaaqa habka dheefshiidka
Difaaca Jirka: Liin dhanaanta waxay kujira Fiitamin C, waxaana uu hortagaa in unugyada jirka ay dhaawacmaan. Fiitamiin C waxaa uu hoos uu dhigaa xanuunada ku dhaca wadnaha iyo xididada, waxaa kaloo uu yareeyaa cadaadiska dhiigga iyo faaliga. Fiitamiin sidoo kale waxa uu si weyn u la dagaalamaa ifilada iyo hargabka.
Miisaanka Jirka Sida aan kor kusoo xusnay liin dhanaantu waxay caawisaa luminta miisaanka, Waxaa la aamin sanyahay in ay yareyso miisaanka jirka kaga yimaada cunada dufanka badan, sidoo kale waxay yareysaa iska caabinta hormoonka Insulin.
Caafimaadka mindhicirrada: Liin dhanaanta waxaa ku jira pectin fiber oo faaido weyn u leh caafimaadka mindhicirka weyn, sidoo kalana bakteeriyada la dagaalama.
Quruxda maqaarka: Fiitamiin C-ga ku jira liinta waxaa uu jirka ka difaacaa duuduubka. Waxaa haboon inuu qofku cabbo ugu yaraan 8 koob oo biyo ah maalin kasta si uu jirkiisa u fuuqceliyo. Biyuhu waxay qashinka ka saaraan maqaarka qofka.
Ha hortagga dhagaxaanta Kilyaha: Liinta waxaa ku jirta maado la yiraahdo “Citric Acid” oo ka hortagta in kilyaha ay ku sameysmaan dhagaxyada Kalshiyam,
Caafimaadka afka: Liin dhanaantu waxay carfisaa afka, waxayna yaraysaa ilko xanuunka iyo yiridka.
Biyaha liin dhanaanta waxay hagaajiyaan caafimaadka indhaha.
Waxaad u baahantahay koob biyo diiran ah, korka uga tuuji 1 ama 2 xabo oo liin dhanaan ah ku darso 1 qaado oo malab ah hadii aad heli karto kadibna cab, sidaan samee subax kasta quraacda ka hor.
Liin Dhanaantu Waxay Jirka Ka Saartaa Sunta, Waxayna Ka Qayb Qaadataa Dhimista Miisaanka Xanuunada Lagu Daweeyo Cabbista Biyaha Kulul & Xilliyada ku Haboon in la Cabo Ku Maydhashada Biyaha Kulul Waxay Dhibaatooyin Ku Keenaan Maqaarka Jidhka Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado